यी खानेकुरा खानुहाेस् तनाव हटाउनुहोस् - Birgunj Sanjalयी खानेकुरा खानुहाेस् तनाव हटाउनुहोस् - Birgunj Sanjalयी खानेकुरा खानुहाेस् तनाव हटाउनुहोस् - Birgunj Sanjal
यी खानेकुरा खानुहाेस् तनाव हटाउनुहोस्
१४ भाद्र २०७६, शनिबार ०३:३९
तनावका असर कम गर्न उपयोगी अर्को फल हो, अमला । अमलामा भिटामिन सी पाइन्छ, जसले तनाव उत्पन्न भएका कारण रगतमा आएको रासायनिक परिर्वतनलाई पूर्ववत अवस्थामा पु-याउन मद्दत गर्छ । त्यही भएर तनावपूर्ण दिनहरूमा प्रतिदिन दुइटा अमला खाने गर्नु राम्रो हुन्छ ।
टाइफाइड भएमा यसो गर्नूस् !
पिसाब पोल्ने वा दुख्ने समस्या छ ? के भन्छन् मुत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर पशुपति भट्ट